Izindaba - I-LightCounting: Imboni yezokuxhumana ebonakalayo izoba ngeyokuqala ukululama ku-COVID-19
I-LightCounting: Imboni yezokuxhumana ebonakalayo izoba ngeyokuqala ukululama ku-COVID-19
NgoMeyi., 2020, iLightCounting, inhlangano yezocwaningo yemakethe yezokuxhumana eyaziwayo, ithe ngo-2020, umfutho wokuthuthuka wemboni yezokuxhumana unamandla kakhulu. Ekupheleni kwe-2019, isidingo se-DWDM, i-Ethernet, ne-fronthaul engenantambo sikhuphukile, okuholele ekushodeni kwamaketanga okuhlinzeka.
Kodwa-ke, kwikota yokuqala yonyaka we-2020, ubhubhane lwe-COVID-19 lwaphoqa amafemu emhlabeni wonke ukuthi avale, futhi ingcindezi yokuthengwa kwezimpahla yenyukela ezingeni elisha lonke. Iningi labahlinzeki bezingxenye libika imali engenayo engaphansi kokulindelekile kwikota yokuqala yonyaka wezi-2020, futhi okulindelwe kwikota yesibili akuqinisekile. Ifektri eseChina yavulwa ekuqaleni kuka-Ephreli, kodwa izinkampani eziningi eMalaysia nasePhilippines zisavalwa, futhi izinkampani zaseYurophu naseNyakatho Melika zisanda kuqala ukusebenza. ILightCountin ikholelwa ekutheni isidingo samanje sokuxhumeka okubonakalayo kumanethiwekhi ezokuxhumana ngocingo kanye nasezikhungweni zedatha sinamandla kakhulu kunasekupheleni konyaka we-2019, kepha amanye amaphrojekthi wokwakhiwa kwenethiwekhi nedatha abambezelekile ngenxa yalolu bhubhane. Abahlinzeki bemodyuli ye-Optical ngeke bakwazi ukuhlangabezana nohlelo lwabo lokuqala lokukhiqiza kulo nyaka, kepha ukwehla okukhulu kwamanani wemikhiqizo kungahle kwehle ngo-2020.
I-LightCounting ilindele ukuthi uma yonke imboni ivulwa engxenyeni yesibili yalo nyaka, abaphakeli bezinto ezibonakalayo kanye nabaphakeli bamamojula bazoqala kabusha ukukhiqizwa okugcwele kwikota yesine yonyaka we-2020. Kulindeleke ukuthi ukuthengiswa kwamamojula we-optical kuzokhuphuka ngokulinganisela ngonyaka we-2020 futhi kuzonyuka ngo 24% ngo-2021 ukuhlangabezana nesidingo se-bandwidth enkulu yezinhlelo zokusebenza.
Ngaphezu kwalokho, kuqhutshwa ukwakhiwa kwe-5G okusheshayo kweChina, ukuthengiswa kwamadivayisi we-optical we-wireless fronthaul kanye ne-backhaul kuzokwenyuka nge-18% kanye ne-92%, ngokulandelana, okuyiyona nto ebhekiswe kulo nyaka. Ngaphezu kwalokho, ukuthengiswa kwemikhiqizo ye-FTTx nama-AOC esigabeni sokuxhuma kwe-optical, okuqhutshwa ukuthunyelwa eChina, kuzokhula ngamadijithi aphindwe kabili ngonyaka we-2020. Isabelo semakethe ye-Ethernet ne-DWDM sizoqala kabusha ukukhula kwamadijithi amabili ngo-2021.